के सौर ताप र चिसो को भविष्य हो?
केही मानिसहरूले भविष्यवाणी गरिरहेका छन् कि सौर्य उर्जा ताप र चिसोको भविष्य हुनेछ। तर के यो वास्तवमै हुनेछ? कुनै पनि उर्जा विषयको रूपमा, त्यहाँ खेल्ने थुप्रै कारकहरू छन्; ब्याट ठीक छ, सौर ताप र शीतलक वर्तमान मा परम्परागत हीटिंग र शीतकरण एकाइहरु को रूप मा लोकप्रिय छैन। यद्यपि सौर्य तताउने र कूलि units इकाईहरूले गर्व गर्छन् कि उनीहरूले तताउने र चिसो खर्चलाई पचास प्रतिशतसम्म घटाउन सक्दछन्, जुन एकदम महत्त्वपूर्ण भिन्नता हो र यसले कसैलाई लामो समयसम्म धेरै पैसा बचत गर्न सक्दछ।
(संक्षिप्त) यो कसरी काम गर्दछ
यी सौर्य ताप दिने र कूलि systems प्रणालीहरूले गर्ने तरीका पारम्परिक मोडेल भन्दा अलि फरक छ। तिनीहरूले सूर्यबाट तातो पासो, अन्यथा सौर विकिरण को रूप मा चिनिन्छ, र ताप वा ताप पानी को रूप मा वा वायु को लागी तापीय ऊर्जा को रूप मा प्रयोग गर्न। काममा अहिले धेरै फरक डिजाइनहरू छन्, तर सामान्य विचार यो हो कि उपकरणले सूर्यको तापलाई पानी वा वायुको लागि तापमा परिवर्तन गर्दछ जुन उनीहरूको घरका मानिसहरूले प्रयोग गर्न सक्दछन्।
विश्वभर, धेरै मानिसहरू यस प्रविधिलाई अझ भरपर्दो बनाउन र विश्वभरि अन्यहरूका लागि उपलब्ध गराउन काम गरिरहेका छन्। सौर्य ऊर्जा (र अन्य नवीकरणीय उर्जा प्रविधि) को धेरै व्यक्तिलाई मद्दत गर्न प्रभाव पार्छ, विशेष गरी कम आय भएका घरहरूमा, जहाँ उपयोगिता बिलहरूले उनीहरूको पेचेकको ठूलो अंश लिन सक्दछन्। यसमा बाह्य आयातित ईन्धनहरूमाथिको हाम्रो निर्भरता कम गर्ने सम्भाव्यता पनि हुन सक्छ, नीतिहरूको अनुपालन गर्न आवश्यकता घट्दै छ र हामीले नगरे पनि नहुने डीलहरू गर्ने।
यो HVAC उद्योगमा धेरै व्यक्तिहरूको लागि सम्भावित जीवन परिवर्तन हुन सक्छ, किनकि हामीले बिभिन्न उपकरणहरू सिक्नुपर्दछ, अनुकूलन र स्थापना गर्नुपर्दछ। अझ बढी, यस नवीनताले धेरै मानिसहरूलाई मद्दत गर्दछ, साथै वातावरणलाई पनि किनभने ठाउँ र पानी तताउने र शीतलक औसत परिवारमा use percent प्रतिशत उर्जा प्रयोग गर्दछ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँको सौर एकाईले तापिरहेको छ र तपाइँको हावा र पानी चिसो गर्दैछ भने, तपाइँ फेरि उपयोगिता बिलहरु लाई काट्न सक्नुहुन्छ पर्याप्त रकममा।
यद्यपि परम्परागत तताउने र शीतलतामा सौर्य शक्तिले तताउने र शीतलतामा बृहत् स्थानान्तरण गर्न धेरै लामो समय लाग्न सक्छ, किनकि धेरै व्यक्तिहरूको अझै पनि उनीहरूको इकाइहरू ठीकसँग चलेका छन्, र धेरै मानिसहरूले अझै पनि पारम्परिक एचभीएसी प्रणालीहरू सबै समय खरीद गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ कि धेरै व्यक्तिले उनीहरूको पुरानो इकाईहरूको कारण केवल मर्मत वा प्रतिस्थापनको कारण बाध्य हुनुपर्दा स्विच गर्दैन। यी नयाँ प्रणालीहरू नयाँ घरहरूमा प्रायः परम्परागत इकाइहरू भन्दा अधिक देखिने छ किनभने निर्माणकर्ताहरूले उनीहरूको नयाँ घरहरू 'हरियो' को रूपमा प्रचार गरेर उनीहरूको घरलाई पुरानो घरभन्दा राम्रो वातावरणको लागि अझ राम्रो बनाउनको लागि देख्दछन्।
जटिलता र अन्तिम विचारहरु
यस सौर्य आन्दोलनले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भाव्यता पनि राख्दछ, किनकि धेरै मानिसहरूलाई अझै पनि उद्योगको विकास र विकास गर्न मद्दतको लागि आवश्यक पर्दछ। यद्यपि कम्पनीहरुबाट धेरै स्विचओभर हुनु पर्छ जुन अझै परम्परागत तताउने र शीतकरण एकाइहरु सिर्जना, बिक्री, मर्मत, वा प्रतिस्थापन गर्दैछ। यो अपरिहार्य देखिन्छ कि सौर्य ताप दिने र चिसि the भविष्यमा हुने छ, तर यो यस्तो हुने छैन जस्तो कि मानिसहरूले सोच्ने बित्तिकै यस्तो विशाल कारोबारले सामान्यतया समय लिन्छ।
मोबर्लीमा नियन्त्रित ऐयर हीटिंग र कूलि of, एमओका स्टाफ द्वारा लिखित। नियन्त्रित Aire नम्बर एक कम्पनी हो जब यो तापक्रम र कूलिंग को लागी आउँछ मोबरली मो प्रस्ताव छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वातावरणीय मुद्दाहरू विश्व सामना गर्दै
युटामा रेडन मिटिगेसन: घरमालिकहरूलाई के थाहा हुनुपर्दछ